Nhau - Maitiro ekurega vatengi vachitenga vakasununguka pasi pechirwere mamiriro
Maitiro ekurega vatengi vatenge vakasununguka pasi pechirwere mamiriro
Kubva pakatanga COVID-19, hatigone kuenda zvakasununguka kune another nyika, shanyira mafekitori kuti utarise mhando yezvigadzirwa, uye uite pane-saiti kutenga sepakutanga. Iyo coronavirus ichaenderera kwenguva yakati, nekuda kwemamiriro ezvinhu aya, Mingding Group yakaita musangano wemukati nemusoro wenyaya we "mhando-yekudzora yakaoma ,Maitiro ekugadzira akaonekwa ”. Vamiriri vekutengesa dhipatimendi, R & D department uye dhipatimendi rekugadzira, dhipatimendi rekushandisa chigadzirwa, mushure-rekutengesa dhipatimendi rebasa vakapinda musangano. Mutungamiri weboka Eric akaisa pamberi zvitatu zvinodiwa mumusangano: 1. Kurumidza kumisa kuvakwa kwenzvimbo yekutepfenyura kwekambani, kuitira kuti vatengi vakwanise kushanyira fekitori yedu vachinwa kofi pamba. 2. Kufambira mberi kwekugadzirwa kwezvigadzirwa zvemutengi zviri pasi pekugadzirwa kucharatidzwa kumutengi muchimiro chevhidhiyo kufona munguva: 3.Sezvo zvisingaite kuenda kunze kwenyika kunoshanyira vatengi vekare kumasevhisi avo, mushure mekutengesa vashandi vanofanirwa kubata kutengesa department uye shandisa vhidhiyo kufona ku bvunza nezve iyo iyo matambudziko apo vatengi kushandisa michina yedu. Kana ivo vachigona kugadzirisa dambudziko iri muvhidhiyo kufona, ivo vanofanirwa kupa yakanakisa mhinduro kune vatengi.
Munguva yakakosha nguva, isu tinofanirwa Ita chokwadi mhando yezvigadzirwa zvedu zvirinani uye kubata hunhu sehupenyu hwedu. Kunyanya kungwarira isu tiri mukugadzira, mashoma matambudziko zvichazova mune zvigadzirwa.
Panguva yemusangano, takataura nevamiriri vedu kubva kuAsia neEurope, avo vakaongorora misika yavo uye vakatenda kambani nekutsigira kutanga bhizinesi ravo.
Pakupera kwemusangano, Emma, ​​maneja weDhipatimendi Rezvekutengeserana Kwekunze, akaverengera mutengi tsambas, umo zvakataurwa izvozvo nguva imwe mushandirapamwe yakagadzirwa shamwari yeupenyu hwese. Kunyangwe isu tiri zviuru zvemamaira takaparadzana, moyo yedu iri pamwe.Hutachiona hunopedzisira hwavekukundwa nevanhu, tichazosangana zvakare.